Underwear Vanopa uye Fekitori - China Underwear Vagadziri
Fakitori yakananga kutengesa butt inosimudza inotakura buttocks panties tummy control sexy vakadzi panties
Yepamusoro-chiuno boxer matanda ane mudumbu uye chiuno chemunhu akakwana. Chiuno chakapetwa, chisina kupfeka, chisina kujeka uye chisina kugadzikana, chakagadzikana uye chinofema. Yakagadzirwa 95% kotoni + 5% spandex, yakapfava uye yakarukwa, yakavhi isina kusiya chero tsotso.
Tummy control inotakura buttocks panties shaper lifter kusundira kumusoro pad pad kusimudza underwear
Lace isina mavara muhudyu-muhudyu boxer, yakazadzwa nesiponji, yakarongedzwa muchiuno. Lace lace, izere neyechikadzi runako, sexy uye isina musono. Mairi maviri emukati magiya akachengeteka. Yakakwirira elastic yakakodzera, yakasimba uye yakasimba. Imwe-chidimbu chekuumba tekinoroji, iyo mucheka wakareruka uye usinga-maka uye unofema.